Torohevitra hampihenana ny lalan-drantsika miaraka amin'ny voatabia maintso sy mena | Nutri Diet
Fausto Ramirez | | aretina
Ny voan'ny voatabia Manana toetra anticoagulant izy ireo izay manatsara ny fandehanan'ny rà. Ny fampiharana azy io dia afaka manampy amin'ny fampihenana lalan-drà. Ny lalan-drà varika dia lalan-drà mihahaka ka manjary mamaivay ary azo jeren'ny maso mitanjaka, ka izany no maneho ny olan'ny hatsaran-tarehy amin'ny lahy sy ny vavy.
Ny ankamaroan'ny olona dia manandrana mitady iray vahaolana amin'ity toe-javatra ity izay tsy dia tsara tarehy amin'ny tongotra na amin'ny faritra hafa amin'ny vatana. Zava-dehibe ny mahafantatra fa ny lalan-drantsika dia mitaratra olana iray fikorianan'ny fiheveran'olombelona izay azo hamafisina amin'ny soritr'aretina hafa toy ny mavesatra, ny fanaintainana ary ny havizanana amin'ny tongotra.
El tratamiento fa ity aretina ity dia tapa-kevitra hisorohana ny fampandrosoana ny phlebitis, ambaratonga avo kokoa izay miteraka ny fanakanana tanteraka ny lalan-drà, miteraka fivontosana izay mety miteraka fahasarotana maro. Androany ny indostria dia manolotra safidy hafa izay mampanantena fa hanatsara sy hanasitrana ity olana ity ao anatin'ny fotoana fohy. Na izany aza, mazàna lafo ireo fitsaboana ireo ary tsy dia hita loatra ny vokany.
Noho izany antony izany, fitsaboana mifototra amin'ny mamokatra Anarana iombonana amin'ny voajanahary, izay manararaotra ny hatsaram-panahy amin'ireo akora sasany hanatsarana ity fepetra ity. Andao hojerentsika ny vahaolana voajanahary mifototra amin'ny voatabia maitso sy mena, izay manome fanamaivanana lehibe ho an'ireo olona tratry ny lalan-drantsika.
ny voatabia Anisan'ny voankazo malaza sy be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao izy ireo. Eny tokoa, io no tena ilaina amin'ny lovia maro eran'izao tontolo izao. Noho ny fampiasana matetika azy dia tapa-kevitra fa sakafo misy be io afa-po sakafo ary ny hatsaram-panahy izay tsara indrindra amin'ny fahasalamana.
Ho an'ny lalan-drantsika varicose, voatabia dia tsara satria ny voany dia misy asidra misy fananana mitovy amin'ny aspirinina, izay mihena kokoa noho ny ra, manatsara ny fikorianan'ny rà. Ho fanampin'izany, izy ireo dia misy flavonoid be dia be, fitambarana antioksida manamafy ny lalan-dra.
Fitsaboana voatabia maintso
Hanombohana dia tsy maintsy manasa ny voatabia hiantohana fa voa tsara izy ireo. Voadidy ho silaka izy ireo ary apetaka amin'ireo faritra voan'ny tongotra. Fehy iray ampiasaina hanaronana ny faritra iray manontolo mba hanamboarana ny voatabia mandritra ny fotoana iasany. Raha vantany vao mahatsapa fangirifiriana sy fanindronana kely ianao dia midika izany fa azo esorina ireo fehy. Sasaina amin'ny rano matimaty ny tongotra ary maina tsara. ATSINANANA tratamiento Azo atao hatramin'ny in-5 isan'andro ary mora ny manamarika ny fanatsarana ao anatin'ny herinandro vitsivitsy.
Ny fitsaboana voatabia mena
Misasa tsara izy ireo voatabia MENA ary tapaho ny silaka. Apetaka amin'ireo lalan-drà voakasik'izany izy ireo ary rakofana fehin-kibo mba hanamboarana ireo silaka. Avela hiasa mandritra ny 4 ora, ovaina ny silaka ary avela hiasa mandritra ny adiny 4 hafa izy ireo. Ny fitsaboana dia azo atao isaky ny tolakandro, mba hanamarinana ny fiovana sasany ao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Ka izay ny fambara an'io toe-javatra nihena tamim-pahombiazana, zava-dehibe ny famitana an'io fitsaboana io amin'ny alàlan'ny fananganana a fitondrana sakafo salama sy mahay mandanjalanja.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » aretina » Torohevitra hampihenana ny lalan-drantsika miaraka amin'ny voatabia maitso sy mena